सुधारका लागि स्रोत भन्दा सोंच बढी महत्वपूर्ण छ – EducationPati – A complete news portal on Education in Nepal
लेखक : डा. जानुका नेपाल
२४ जेष्ठ २०७७, शनिबार डा. जानुका नेपाल, निलबराही मावि
काठमाडौंको मध्यभाग कालिमाटीमा रहेर पनि कुनैबेला भौतिक पूर्वाधार र विद्यार्थी अभावमा गाभिने अवस्थामा पुगेको विद्यालयमा प्रधानाध्यापकका रुपमा डा. जानुका नेपाललाई पाउनसाथ विद्यालयले बिस्तारै काँचुली फेरेको महशूस गर्न थालिएको छ । गरे सम्भव छ भन्ने आफूलाई उदाहरणीय बनाउनुभएकी प्रअ नेपालकै सक्रियतामा विद्यालय अहिले राजधानीका उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयमा दह्रिन सफल भयो । सुधारका लागि स्रोतलाई भन्दा सोंचलाई बढी महत्व दिने डा. नेपालसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
२०७५ साउन ३० गते १३:०६मा प्रकाशित